Wefdi horu dhac u ah safarka Madaxweyne Xasan Sheekh oo lagu soo dhaweeyay Baydhabo (Sawirro) | Allbanaadir.com
Home NEWS Wefdi horu dhac u ah safarka Madaxweyne Xasan Sheekh oo lagu soo...
Wefdi horu dhac u ah safarka Madaxweyne Xasan Sheekh oo lagu soo dhaweeyay Baydhabo (Sawirro)
Magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee maamulka Koonfur Galbeed waxaa gaaray wefdi horu dhac u ah safar lagu wado in beri oo talaado ah magaalada Baydhabo ku gaaro Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Masuuliyiin katirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa garoonka diyaaradaha Baydhabo kusoo dhaweeyay agaasimaha cusub ee Madaxtooyada Soomaaliya, xildhibaano katirsan labada Aqal iyo xubno kale oo hor dhac u ah safarka Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkii ugu horeeyay tan iyo markii la doortay 15-kii bishan ku tagaya magaalada Baydhabo halkaas oo la filayo in uu kula kulmo Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Safarka Madaxweyne Xasan Sheekh ku tagayo magaalada Baydhabo ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ka socdeen shirar looga soo horjeedo maamulka uu hoggaamiyo Madaxweyne Laftagreen oo mucaaradad xoogan wajahaya.
Previous articleWasiirka Amniga oo ka digay Hab dhaqanka qaar kamid ah Masuuliyiinta dowladda
Next articleGuddiga Gurmadka Abaaraha oo soo bandhigay xogta la xariirta abaaraha (Sawirro)